Famongorana halatr'omby :: Miaramila roa arivo lahy handeha hiady amin’ny dahalo • AoRaha
Famongorana halatr’omby Miaramila roa arivo lahy handeha hiady amin’ny dahalo
Mihamafy ny ady. Nanainga niala teto andrenivohitra, omaly, ireo vata miaramila avy amin’ny Tafika miisa roa arivo lahy mahery. Hamonjy avy hatrany an’i Maevatanàna, Bongolava, Melaky, Miandrivazo, Ikalamavony, Toliara ary ny faritra Atsimo Atsinanana izy ireo, araka ny fanazavan’ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ireo Etamazaoron’ny Tafika Malagasy na CEMA.
Laharam-pahamehana amin’ny iraka ampanaovina an’ireo andiana miaramila ireo ny ady amin’ny dahalo. « Hitandro ny fandriampahalemana any ambanivohitra izy ireo. Tsy matory akory ny mpitandro filaminana na eo aza ny ady amin’ny valanaretina coronavirus. Misy amin’ireo Tafika any amin’ireo toerana handefasana azy ireto no hitodi-doha aty an-drenivohitra. Manomboka tsapa ny vokatra azo tamin’ny fampandriana fahalemana nandraisan’ny Tafika anjara ka mila hamafisina sy tohizana hatrany », hoy ny CEMA.
Fahatrarana basy an’arivony
Fantatra fa an’arivony ireo basy tra-tehaka, nandritra izay volana vitsy niantombohan’ny hetsika fampandriana fahalemana nataon’ny Tafika izay. Omby an’aliny no tafaverina amin’ny tompony. Nisy ihany koa anefa ny fandikankeloka vitsivitsy nataon’ireo Tafika tamin’ny fanatanterahana ny asany, ka tsy maintsy nidinan’ny CEMA ifotony mihitsy ny tranga sasany nentina nandaminana ny mponina, toy ny zavanisy tany Tsiroanomandidy, vao tsy ela akory izay..
Niezaka ny niantoka fahalemana tany ambanivohitra ny fisian’ireo Tafika ao anatin’ny Zrps na faritra manokana arovana. Tsy ny ambanivohitra ihany fa misy koa ny renivohitry ny faritra sasany izay hiasan’izy ireo. « Nanampy betsaka ireo Tafika sy ny zandary teto an-drenivohitry ny faritra Bongolava. Teo aloha, dia saika isak’alina no andrenesana fanafihana foana. Nanampy tosika ireo Tafika niaraka tamin’ireo zandary vao lefy ireo jiolahy », h oy Randrenjanirina Bernardin, mponina any Tsiroanomandidy.
Fananganana komity loharano :: Hanadihady isam-pokontany ny Fiadidiana ny Repoblika
Lozam-pifamoivoizana :: Nirehitra ny fiara roa nifandona